ငွေလဲနှုန်း MMK သို့ JPY, မြန်မာ့လေကြောင်းကျပ်ငွေ နှင့် ဂျပန်ယန်း, ပွောငျး
ငွေလဲနှုန်း MMK — JPY ပွောငျး မြန်မာ့လေကြောင်းကျပ်ငွေ နှင့် ဂျပန်ယန်း, ဂဏန်းတွက်စက်, ဘယ်လောက်အလိုတော်
0,08 JPY ဂျပန်ယန်း
ဒီငွေလဲနှုန်း MMK/JPY ရက်စွဲအပေါ်သက်ဆိုင်ရာ 25.10.2020 00:59
သင့်အနေဖြင့်ငွေကြေးကူးပြောင်းခြင်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်များမှာ မြန်မာ့လေကြောင်းကျပ်ငွေ (MMK) и ဂျပန်ယန်း (JPY). အဆိုပါလဲလှယ်မှုနှုန်းကို up-to-date ဖြစ်အောင်ဖြစ်ပါသည် 25.10.2020 00:59.
ဂျပန်ယန်း (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ code ကို JPY) — : ဒေသခံငွေကြေးကဲ့သို့သောနိုင်ငံများအတွက်ဖြစ်ပါသည် ဂျပန်.
20000 1 627,77
500004069,43
100 1 228,67
2002457,35
5006143,37
1000 12 286,75
2000 24 573,50
5000 61 433,74
10000 122 867,48
20000 245 734,96
50000 614 337,40
ငွေကြေးက ISO code ကို JPY
အထိမ်းအမှတ် ¥ • 円 • 圓 • 元
အနု Sen (1/100)
ဒင်္ဂါးပြား 1, 5, 10, 50, 100, 500 JPY
ပိုက်ဆံငွေစက္ကူတွေ 1000, 2000, 5000, 10 000 JPY
ပူစီနံ ဂျပန် Mint,
ACS အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး. Page load 0.1164 s.